त्यसैले यो हल्लैहल्लाको देश… « KhelkudNews.com
त्यसैले यो हल्लैहल्लाको देश…
Published On : 23 May, 2014 1:39 pm
सन् २०१२ मा स्पेनले युरोकप फुटबलको उपाधि रक्षा गरेपछि टोलीको सर्बत्र स्वागत गरियो । स्वागत कार्यक्रममा बोल्दै टोलीका महत्त्वपूर्ण खेलाडी जाभीले भने, ‘स्पेन अहिले आर्थिक मन्दीमा छ । देशको अर्थ व्यवस्था बिग्रिएको छ । हाम्रो उपाधिले ती सबै समस्याको समाधान गर्दैन । फगत यत्ति हो अबका केही दिन स्पेनिस नागरिक यो खुसीयालीमा आर्थिक संकटलाई बिसर्ने छन् र हामीलाई साथ दिने छन् । पीडाबाट दिर्घकालीन मुक्ती त राज्यले आर्थिक सुधारबाट नै गर्नुपर्छ ।’
नेपाली क्रिकेटले बंगलादेशमा सम्पन्न ट्वान्टी २० विश्वकप क्रिकेट प्रतियोगितामा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेर फर्किएको छ । जुन प्रदर्शन सम्मनयोग्य पनि छ । यसले नेपाली नागरिकमा एक खाले खुसीयाली छाएको छ । तर, क्रिकेटको नाममा पछिल्ला समय भएका केही अनावश्यक विवाद भए । यो विवादमा अखिल नेपाल फुटबल संघका अध्यक्ष गणेश थापादेखि माओवादी नेता सिपी गजुरेलसहित पत्रकार ऋषि धमलासम्म तानिए । मानौं यस्तो अवस्था आयो कि कुनै क्रिकेट समीक्षकले क्रिकेटको समीक्षा गर्दा ९० प्रतिसत सकारात्मक र १० प्रतिसत नकारात्मक कुरा राख्यो भने क्रिकेटप्रेमीको एउटा हुलले १० प्रतिसत नकारात्मक कुरा राखेकै कारण आक्रमण गर्ने हुन् ।
नेपाली समाजको एउटा परम्परा छ, व्यगात्मक रुपमा भन्ने गरिन्छ, ‘नेपालीहरुलाई आफ्नो क्षेत्रको बाहेक अन्य सबै क्षेत्रको कुरा थाहा हुन्छ ।’ सबै नेपाली लाग्छन्, अहिले क्रिकेटविज्ञ भएका छन् । समाचारका पानाहरुमा ऐतिहासिक र सर्वोत्कृष्ट शब्द यत्रतत्र प्रयोग भएको छ । यी दुवै शब्द सापेक्षिक शब्द हुन् । यी शब्दको प्रयोग सबै सरोकारवाला विषयको ज्ञान नभई गर्नु हुन्छ कि हुँदैन ?
एउटा सफलतामा रमाएर पागल हुने र एउटा असफलतामा दु:खी भएर पागल हुने नेपाली परम्परा चिया पसलदेखि भट्टी हुँदै सामाजिक र राजनीतिक नेतृत्वले देखाएका छन् । उल्लेखित तीन विवादतर्फ नै जाऔं । कुनै व्यक्तिको पहिलो काम भनेको आफ्नो क्षेत्रको विकासमा ध्यान दिने हो । यदी त्यसो हो भने देशको उन्नती यसैमा हो । क्रिकेट खेलाडीले राम्रो खेले, उनीहरुको काम गरे । तर, यसको मतलब अन्यको जिम्मेवारी क्रिकेट नै हुनु पर्छ भन्ने होइन । गणेश थापा फुटबल संघका अध्यक्ष हुन् । उनले फुटबलबारे वकालत गर्नै पर्छ । सत्य यो पनि हो कि फुटबल संसारमा र नेपालमा सबैभन्दा लोकप्रिय खेल हो । संसारका सबै देशले प्राथमिकतामा राखेको यो खेलले नेपाललाई दिलाएको सफलता या असफलतालाई यसैको सन्दर्भमा हेर्नु पर्छ । क्रिकेटले सफलता दिलाइरहँदा नेपाली चलीले यु–१४ रिजनल च्याम्पियनसिप फुटबल प्रतियोगितामा पनि उत्तिकै सानदर प्रदर्शन गरिरहेका थिए । यो छायाँमा पर्‍यो । कुनै समय सिंगो देश क्रिकेटमा रमाइरहेको समयमा नेपालले साफ च्याम्पिनसिप महिला फुटबल प्रतियोगिातमा फाइनलको यात्रा तय गरेको घटना पनि छाँयामा परेको थियो । चाहना बम्जनले विश्व जुनियर उसु च्याम्पिनसिपमा प्राप्त गरेको पदक पनि छाँयामा पर्‍यो । प्रसंग थापाकै, यदी उनले फुटबलको वकालत गरिहन्छन् भने सबैले उनीबाट पाठ सिक्नु पर्छ । उनको खुलम्खुला प्रशंसा गर्ने हिम्मत राख्र्दै भन्नै पर्छ, ‘अन्त जेसुकै होस् मेरो फुटबल मेरा लागि सबैभन्दा प्रिय हो भन्ने गणेश थापाजस्तो आफ्नो खेलमा प्रतिबद्ध व्यक्ति हरेक खेलमा चाहिन्छ । अन्यको प्रशंसामा मात्र रमाएर आफ्नो अकर्मण्यता लुकाउने संघ अध्यक्षको खाँचो छैन ।’
प्रसंग गजुरलेको पनि हो । क्रिकेट खेलको सफलतामा नेपाली केही रमाउने हो । तर, यस पछिका दिन त नेपालीको काम गरिबीसँग संघर्ष गर्ने नै हो । राज्यको काम त जाजरकोटमा वर्षेनी झाडा पखालबाट मर्नेको संख्यामा कमी ल्याउने हो । सडक दुर्घटनाबाट मर्नेको संख्यामा कमी ल्याउने हो । यस्ता थुप्रै समस्याको समाधान गर्नु नै छ । क्रिकेटको हकमा प्रशंसामा समय खर्चनेभन्दा पनि भाबी सम्भावनाको अध्ययन र योजना बनाउने हो । जहासम्म ऋषि धमलाको सवाल छ, उनले लिएको टिभी अन्तरवार्ताको चर्चा छ । एउटा कुरा सत्य हो ‘अन्तरवार्ता लिने सञ्चारकर्मी आफै त्यस विषयम जानकार हुनै पर्छ ।’ तर, ऋषि धमलाबाहके अन्यले लिएको अन्तरवार्तामा विषयका जानकारी कत्ति थियो । सञ्चार क्षेत्रमा प्रवेश गर्न विषयगत जानकारी कत्ति हुनु पर्छ ? यो कुरामा नेपालको सम्पादकीय नेतृत्व कत्ति जिम्मेवार भयो ? कुनै एउटा विषयमा सञ्चारगृहभित्र वाहवाही कमाउने तर, सरोकारवाला क्षेत्रले सदैब गैरजिम्मेवारको आरोप लगाइने अवस्था पनि छ । सरोकारवालामा लोकप्रिय हुने र सञ्चारगृहभित्र सधै हतोत्साहित हुने समस्या के ऋषि धमलाले लिएको अन्तावार्ताभन्दा अघि थिएन ? ऋषि धमलाले लिएको अन्तरवार्ता हलुको थियो । कटुसत्य यो पनि हो कि अन्य सञ्चारकर्मीले पनि यस भन्दा अघि विषयगत जानकारी पूर्ण रुपमा राख्ने गरेका थिएनन् । यसकारण फेसबुकका भित्तामा समेत धमला जोक बनाउनेहरुले पहिले आफैबाट सुधार गर्ने कि †
खेलकुदमा पाएको सफलताभन्दा महत्वपूर्ण कुरा खेलकुदको संस्कारको हो । ‘मिहेनती व्यक्ति नै उत्कृष्ट हुन्छ । उत्कृष्ट नै च्याम्पियन हुन्छ’ खेलकुदको सर्वमान्यता यही हो । नेपालको राजनीतिक र सामाजिक नेतृत्व क्रिकेटको प्रशंसामा मात्र शब्द खर्चुुनभन्दा खेलकुदबाट यसको संस्कारबारे पाठ लिदै र आफूलाई सुधार गर्दै ठीक होइन र ? ‘अनुशाषित हुनु पर्छ, प्रतिद्वन्द्वीको सम्मान गर्नु पर्छ र कसैलाई हतोत्साहित गर्न पाइँदैन ।’ यो मान्यतालाई जबसम्म समाजले स्वीकार गर्दैन, त्यो समाजको नतिजामा दिलाएको सफलताको अर्थ रहँदैन । फेसबुकका भित्तादेखि चिया पसलसम्म भएका चर्चाले के यो संस्कारलाई जोगाएको छ ? अहँ छैन ।
व्यक्ति बस्तुवादी हुनु पर्छ । तथ्यगत हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई नेपाली राज्य र समाजका अगुवाले अंगिकार गरे कि गरेनन् ? कसैलाई लाग्यो भने यो सबैभन्दा ऐतीहासिक र सर्वोत्कृष्ट भन्ने हचुवा प्रतिक्रियाहरु सुनिन थालेको छ । के यी शब्द प्रयोग गर्न समग्र अध्ययन आवश्यक छैन ? राज्य र समाजका अगुवाहरूले यसतर्फ अझै पनि ध्यान दिएनन् ।
क्रिकेटले एउटा सम्भावना देखाएको छ । राज्यको काम सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने र योजना बनाउने नै हो । खुसीमा रमाएर फटाफट निर्णय मात्र गर्ने होइन । क्रिकेट खेलाडीको प्रशंसा त गर्नै पर्छ । उनीहरुले प्रशंसा गरिने खालकै खेल खेले । तर, नीति बनाउनेले सबैको सम्भावना र उपलब्धी ध्यान दिने कि नदिने ? नेपाली समाजको एउटा चरित्र छ केही सफलता पाए खुसीयालीमा पागल हुने र संयोगवश हुने दुर्घटनामा पनि मानदर्मन गर्ने । गतसाफ च्याम्पियनसिपमा एक दिन अगाडिसम्म फुटबल टोलीको प्रशंसामा समय खर्चिने भीड एक दिनपछि किरण चेम्जोङ र रोहित चन्दलाई गाली गर्नमै व्यस्त भयो । कमसेकम यो प्रवृत्तीबाट क्रिकेट टोली मुक्त होस् भन्ने हो । राज्य र समाजिक अगुवा भीडको आवाज मात्र होइन, तथ्यगत हुन् भन्ने हो ।
स्वर्ण विजेतालाई चित खुवाउँदै सिलवाल र थापाले पाए पदक
बि.स २०५२ परिषद्का तत्कालीन उपाध्यक्ष सोमनाथ अधिकारी प्यासीको स्वकीय सचिवको रूपमा प्रवेश गरेका थापाले अधिकारीको
समानताको आवाज उठाउँदै महिला फुटबल कमिटी, समान तलबका लागि पहल
पेमा लामा, कीर्तिमानी खेलाडी । पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय गोल गर्ने नेपाली महिला फुटबलर पेमाले नेपाली फुटबलको
खेलकुदमा सधैँ किन कमजोर ओली कित्ता ?
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का निवर्तमान सदस्य सचिव रमेश सिलवाल र उपाध्यक्ष पीताम्बर तिम्सिना ,यी दुवै ओली
आखिर उनी त व्यापारी नै हुन्
नयाँ खेलकुद ऐन सँगै पदावधि सकिएका राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्( राखेप)का निवर्तमान सदस्य सचिव रमेश सिलवालको